BUKA: Abalandeli bahlasele abadlali kuhlulwa yiqembu ngo-6-1 | News24
BUKA: Abalandeli bahlasele abadlali kuhlulwa yiqembu ngo-6-1
Cape Town – Iqembu lebhola laseFrance selikuqinisekisile ukuthi abalandeli ababethukuthele beveva bavimbezele abadlali ngemuva kokubhaxatshulwa yiBarcelona emdlalweni weChampions League.
Leli qembu laseFrance lisazikhotha amanxeba ngalokho osekuchazwe ngabaningi njengokuphenduka kwamatafula okukhulu emlandweni womqhudelwano weChampions League ngemuva kokuthi iBarcelona iphendule amatafula kade ilandela emuva ngo-4-0 ngemuva komlenze wokuqala, ngoLwesithathu kusihlwa.
Kodwa-ke izinto ziphenduke zaba muncu kuPSG sekudlalwa umlenze wesibili njengoba iBarcelona igcine isiwina ngo-6-1, nokwenze imphumela wamagoli esewonke kube ngu-6-5 uma sekubalwa nomdlalo womlenze wokuqala.
OLUNYE UDABA: BUKA: Umlingisi odumile elwa esikhumulweni sezindiza
I-PSG isikunisekisile ukuthi abalandeli bebhola abebedinwe beveva bevimbezele laba badlali ‘ngendlela enokudlubulundela futhi egcwele enkulu intukuthelo’.
Kulesi sigameko kuchashwe ngenhlamba abadlali, kwacekelwa phansi izimoto, kanti omunye umuntu ushayiswe yimoto nokuyisigameko esesiphenywa amaphoyisa.
“NgoLwesithathu kusihlwa, ngesikhathi bebuya eBarcelona, abadlali beParis St Germain bavinjezelwe baphinde basatshiswa abantu abahlukene abaningi eBourget Airport, phezu kokuthi ikilabhu kanye neziphathimandla bebeziqinisile ezokuphepha,” kusho i-PSG esitatimendeni.
“Laba bantu bachaphe ngenhlamba abadlali ngaphambi kokuba bacekele phansi izimoto zabo. Izimoto eziningi zilimele.”
Kudingeke ukuthi izimoto zihambe zigadiwe ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabo, imindeni yabo kanye nabasebenzi.
Leli qembu selizigxekile lezi zenzo kanti uphenyo lwamaphoyisa kuthiwa luyaqhubeka.